Trump, Q-Anon နှင့် 'နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်ကိုရှင်းလင်းခြင်း' ဒဏ္thာရီ (Robert Jensen, Janet Ossebaard) - Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 25 2020 အပေါ်	• 17 မှတ်ချက်
Robert Jensen သည်မကြာသေးမီကညာဘက်နိုင်ငံရေးပါတီများမှဝေးကွာသွားပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်းသူသည်ကြီးမားသော Trump ပရိသတ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဗီဒီယိုများသည်မိုviewed်းမျက်နှာကြက်၌ရှိသောကြယ်အသစ်ကဲ့သို့ပင်လက်ရှိတွင်များစွာကြည့်ရှုခံရသည်; UFO များနှင့်သီးနှံစက်ဝိုင်းများကိုယုံကြည်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး - Janet Ossebaard ။
၎င်းသည် UFO များသို့မဟုတ်သီးနှံများစက်ဝိုင်းများကိုယုံကြည်ရန်မှာအလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်အမှန်တရားရှာဖွေသူများအား Kolder နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မဟာဗျူဟာကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ဂျင်ဆင်နှင့် Ossebaard နှစ် ဦး စလုံး Donald Trump ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ Ossebaard တွင်ယခု၎င်းသည် 'deepstate' နှင့် 'Q Anon' ဇာတ်လမ်းများနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်နေသည်။ ရောဘတ်ဂျင်ဆင်ကဤလျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုသီအိုရီနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဆက်စပ်မှုမရှိစေရန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုနည်းနည်း ပို၍ သိမ်မွေ့စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ငါဒီမှာလုံခြုံမှုကွန်ယက် pawn နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်ကိုငါယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ငါလူတွေကိုလူမည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကအနည်းဆုံးသင့်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူညီတဲ့အမြင်ကိုပေးဖို့၊ ဒါကိုမင်းရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာမှာထည့်သွင်းနိုင်ဖို့လုပ်နေတာ။
သူတို့အားလုံခြုံမှုကိုအသားတင် pawn ဘာတွေလဲ?
Safety net pawns သည်မီဒီယာနောက်ကွယ်မှကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆသော power block တစ်ခု၏ကိုယ်စား၊ မီဒီယာနှင့်လူမှုမီဒီယာများမှဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမခံစားရသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအခြားကွန်ယက်သို့အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာတွန်းအားပေး။ ပင်မလမ်းကြောင်းများသည်လည်း၎င်းတို့အကြောင်းကိုအစီရင်ခံသည် (၎င်းတို့သည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေလျှင်တောင်သင့်အာရုံကိုပေးသောအရာသည်ကြီးထွားလာသည်) ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်လိုအပ်သောနံပါတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံသည် IMBers နှင့်လူမှုမီဒီယာပေါ်တွင် 'ကောင်းသောအသံဇာတ်လမ်း' 'အတွက်ရိုးရှင်းစွာကျဆင်းသွားသောလူများက။
ဥပမာအားဖြင့် ၉၁၁ နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားမှာအမေရိကန်မှာဒီလိုမျိုးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ၉၁၁ စာဖတ်ခြင်း၏အခြားရူပါရုံကိုစဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောထောက်ခံသူများကိုစုဆောင်းထားသူတစ် ဦး ။ ၉၁၁ သည်အတွင်းအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤ Ace Baker သည် ၉၁၁ သည်အတွင်းပိုင်းအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သူများကြားတွင်ကြီးမားသောနောက်လိုက်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ သူကသီအိုရီအမျိုးမျိုးကိုဖုံးအုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေလို့သူထင်တဲ့သူတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်။ သူသည်အမှန်တရားလှုပ်ရှားမှု၏မျက်နှာဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းအားဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
သူ၌ကြီးမားသောနောက်လိုက်တစ်ခုပြီးသည်နှင့်မည်သူမျှမျှော်လင့်မထားသည့်အရာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွင်သူသည်ရုတ်တရက်သူ့မိဘများ၊ ဇနီးနှင့်ကလေးများအားနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သင်သေနတ်သံကိုကြားခဲ့ရသည်၊ ထို့နောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးတင်ပြသူက“ ဒါမမှန်ဘူးလို့ငါထင်တယ်” ဟုပြောသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Ace Baker အတူတူပဲအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူသည်တကယ့်အမှန်တရားလှုပ်ရှားမှု၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ (နားထောင်ပါ ဒီမှာအပိုင်းအစ)
သို့ရာတွင်၊ မဟာဗျူဟာများစွာရှိသည်။ ဥပမာ - 'ဘုရားသခင့်သားသမီးများ' ဂိုဏ်းအတွင်း၌ 'အမှန်တရားလှုပ်ရှားမှု' တွင်ထင်ရှားသောအမည်နောက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကလေးငယ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အားပေးသည့်ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်း။ ဒီ Zen Gardner ဟာ 'အမှန်တရားလှုပ်ရှားမှု' မှာလူအများနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့လို့လူတွေအားလုံးရောဂါကူးစက်ခံရတယ်။
များစွာသောလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုများမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမှန်တရား (သို့) ထင်ရှားသောအမှန်တရားကိုကြေညာရန်အသုံးပြုသည် သူတို့နေရာတိုင်းကိုတွန်းပို့လိုက်လို့နောက်လိုက်အမြောက်အများရတယ်။ Robert Jensen, Janet Ossebaard တို့လည်းအလားတူပဲ။ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မှာငါးဖမ်းလှေအနေဖြင့်လူများနိုင်သမျှများများကိုသူတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကွန်ယက်ထဲသို့ဆွဲတင်ပြီးနောက်အရှုပ်တော်ပုံဖြင့်ငါးဖမ်းလှေကိုမှုတ်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤအချက်သည်သင်သူတို့အားဝေဖန်သူများအားရှက်ရွံ့စေပြီးပင်မမီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသေချာစေသည်။
deepstate နှင့် Q Anon ကိုရှင်းလင်းခြင်း
Robert Jensen နှင့် Janet Ossebaard တို့နှစ် ဦး စလုံးသည် Donald Trump ကိုများစွာမျှော်လင့်ကြသည်။ Q Anon ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသည် encrypted message များကို online ချသူတစ် ဦး အပေါ်တွင်အခြေခံပြီး၎င်းသည် Trump ဖယ်ရှားလိုသောနက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်နှင့်၎င်းနက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေသော Donald Trump အကြောင်းပြောဆိုသည်။ Q Anon သည် AI အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောကောလာဟလများရှိပြီးယခင်ဆောင်းပါးများတွင်လည်းထိုရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုခဲ့သည်။
IBM ရဲ့ Deep Blue စူပါကွန်ပျူတာ အဖြစ်အစောပိုင်း 1996 အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံစစ်တုရင်နှင့် Kasphov နှင့် Google Alphabet's Quantum Computer တို့မှရှုပ်ထွေးဆုံးဂိမ်း၏ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ရိုက်နှက်ဖို့သွားပါ။ ထို့ကြောင့်အစိုးရများသည်မီဒီယာနှင့်အခြားမီဒီယာများနှင့် တွဲဖက်၍ မဟာဗျူဟာတွင်စူပါကွန်ပျူတာများကိုအသုံးပြုကြသည် (အစစ်အမှန်အချိန်တွင်စုဆောင်းသည်) ။
ဒါပေမယ့်ဒါကိုအလယ်မှာထားခဲ့ပါ။ နိယာမအားဖြင့်ပြည်သူလူထုအကြားအတိုက်အခံများအမြဲရှိသည်ကိုအစိုးရများသိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ထိုအတိုက်အခံကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပြီးလူအုပ်ကြီးကိုဖမ်းယူနိုင်ပါကသူတို့အောင်မြင်လိမ့်မည်။ Q Anon သည်ထိုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သည်။
မနေ့ကငါရရှိခဲ့တဲ့ Q Anon အတွေးအခေါ်များ။ ဒါဟာအားလုံးအလွန်ပရောဖက်ပြုပုံရသည်, ဒါကြောင့်မေးကယ့်ကို Trump နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောစှဲပေးသည်။ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဖတ်ပါ
တံခါးကို: ဒေါက်တာ Russell McGregor
houseပြီ ၁၀ ရက် (သောကြာနေ့) ကောင်းမွန်သောသောကြာနေ့အထိ၎င်းတို့အားလုံးအဆုံးသတ်မည့်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအိမ်တွင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်များဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ထိုမတိုင်မီ ၁၀ ရက်ကြာအမှောင်ထုသည်Aprilပြီ ၁ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးထိုရက်များသည်Aprilပြီ ၁၀ ရက်တွင်လည်းအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
'အမှောင်မိုက်' မတိုင်မီချက်ချင်း POTUS သည်ကျွန်ုပ်၏အမေရိကန်လူမျိုးများ ... မုန်တိုင်းသည်ငါတို့အပေါ်သို့သက်ရောက်လိမ့်မည်။ "(" ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ... မုန်တိုင်းရောက်လာပြီ ... ") 'Aprilပြီ ၁ ရက်' ၏သဘောသဘာဝ ပထမတော့ "မှောင်မိုက်" ၏အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသက်သာ။ "အမှောင်ထု" ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ Coronavirus နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်၍ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ဤဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုAprilပြီ ၁ ရက်မတိုင်မှီမြို့ကြီးများစွာတွင် (နှင့်နိုင်ငံများမှ Vert ။ ) တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်။
Australiaစတြေးလျတွင်မတ်လ ၃၁ ရက်တွင်အလုပ်လက်မဲ့နှင့်အငြိမ်းစားဒေါ်လာ ၇၅၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်၊ သို့မှသာလူအများအပြားသေဆုံးကြလိမ့်မည်။ အချို့သောအရေးပေါ်စတိုးဆိုင်များသည်အများဆုံးလိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းရန်ပွင့်လင်းစွာကျန်ရှိနေသော်လည်းစတိုးဆိုင်အများစုကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်။
၁၀ ရက် 'အမှောင်' အတွင်းတွင်လူမှုမီဒီယာသို့မဟုတ်အင်တာနက်မရှိပါ။ လျှပ်စစ်မီးရှိပေမယ့်ရေဒီယိုနဲ့တီဗီမရှိဘူး။ အဘယ်သူမျှမသတင်းစာများပုံနှိပ်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏စစ်တပ်သည်ဤကြေညာသူများကိုပိတ်လိမ့်မည်။
POTUS သည် ၁၀ ရက် 'အမှောင်ထု' အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများထံရောက်ရှိရန်တစ်ခုတည်းသောရနိုင်သောနည်းလမ်းရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာအရေးပေါ်အသံလွှင့်စနစ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိစစ်တပ်တိုင်းသည်ယင်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရှိတီဗီများနှင့်ကိရိယာများသို့ပေးပို့လိမ့်မည်။
POTUS သည်ပြည်ပတွင်ဖြစ်စေ၊ Airforce One ပေါ်တွင်ဖြစ်စေအမှောင်ထုထဲတွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ Airforce One ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းသည်လုံခြုံမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်အတွက်ဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်အသံလွှင့်စနစ်ကို Airforce One မှထုတ်လွှင့်မည်။ POTUS မှအပထိရောက်သောသတင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုရှိလိမ့်မည်။
အရေးပေါ်အသံလွှင့်စနစ်မှတစ်ဆင့်ပညာရှင်ပီသစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတီဗီများနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများသို့ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများ၊ အကြောင်းအရာသည်မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး၊
POTUS သည်အမေရိကန်စစ်တပ်မှနက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ကြောင်းမည်သို့ရှင်းပြမည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ သူကမေးအချက်အလက်ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များတွင်နက်ရှိုင်းသောနက်ရှိုင်းသောနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အထက်တန်းလွှာပုဂ္ဂိုလ်များမှမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဝန်ခံချက်များကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ထိန်းချုပ်မှုတည်ဆောက်ပုံကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုအထောက်အထားများကိုတင်ပြလိမ့်မည်။ စစ်ဘက်ခုံရုံးများ၏ကြေညာချက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
ဤတင်ပြချက်များကို (၁၀) ရက်လုံးလုံးတစ်နေ့လျှင် (၈) နာရီစီထုတ်လွှင့်မည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောသူများနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည်မည်သည့်အရာကိုမှလက်လွတ်မခံရစေရန်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။ မိသားစုများအနေဖြင့်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပေ။ သက်သေအထောက်အထားများပါသည့်အလွန်စက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ၁၀ ရက်ကြာအမှောင်ထုကိုအင်တာနက်ပေါ်မှကြည့်ချင်သူများကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိလိမ့်မည်။ မျိုးချစ်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ calm သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ၊ ယခင်ကစကားပြောရန်မကြောက်ရွံ့သောမျိုးချစ်များကရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲကြောင်နေကြလေသည်။
JFK Jr နှင့်အခြားသူများသည်စစ်ဆင်ရေး၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ဖြစ်နိုင်သည် ကောင်းသောသောကြာနေ့ကုန်ဆုံးချိန် ၁၀ ရက်ကြာအမှောင်ထုသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအမြောက်အများပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။
သောကြာနေ့ကောင်းသောသောကြာနေ့တွင်ဗိုင်းရပ်စ်သည်ယခုအခါလုံခြုံစိတ်ချရပြီးလူတစ် ဦး သည်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားနိုင်ပြီဟုလူသားများအားပြောကြားလိမ့်မည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ဗလီများနှင့်ဗလီများကိုထုပ်ပိုးထားသည်။ များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခများ, ဒါပေမယ့်လည်းကယ်ဆယ်ရေးရှိလိမ့်မည်။
ရာခိုင်နှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျှင်ထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့ဘဲအမှန်တရားကိုလက်ခံရန်အလွန်အမင်းလှည့်ပတ်နေသည်။ ထုံးစံအရသူတို့သည်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်သည်အရာရာတိုင်းကိုအစဉ်ထာဝရထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စစ်တပ်သည်တီဗီနှင့်သတင်းစာထုတ်ဝေသူများအားစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပြီးနောက်၊ မီဒီယာကိုလုံး ၀ ဖော်ထုတ်ပြီးဇာတ်လမ်းကိုချေပနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Guantanamo ဂလားပင်လယ်အော်သို့မပို့ဆောင်ရသေးသောနက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်များသည် ၂၀၂၀၊ 11ပြီ ၁၁ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်လက်နက်ချကြလိမ့်မည်။
ယခုအထက်ပါသည်ပြီးခဲ့သည့်ညက Doald Trump သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အမေရိကန်များကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းရွှေ့။ အီစတာကာလအတွင်းဘုရားကျောင်းသို့တက်စေလိုကြောင်းကြေငြာခြင်းနှင့်ထပ်တူထပ်မျှကိုက်ညီစေသည် businessinsider.com) ။ ဒါကြောင့်မေး Anon ပုံပြင် Trump ကပြောပါတယ်အရာသို့ချောမွေ့စွာ fit ပုံရသည်ကအပိုယုံကြည်အောင်။ ထို ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စခန်းနှစ်ခုလုံးကိုကစားရန်လုံလောက်သည်ကိုမည်သူမျှမသိပါ။
ဒီတော့ Robert Jensen ဘာမှားနေတာလဲ
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Robert Jensen မှာတစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ပြောတာကိုမင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ သူဟာလုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန် (pawn) အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဆက်သွယ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူဟာလုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိပါတယ်။ သူ၏မဟာဗျူဟာသည် Q Anon သီအိုရီကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမကြေညာသေးပါ။ သို့သော်သူပြီးသားဖြေရှင်းချက်ပြproblemနာထက်ပိုဆိုးမဖြစ်သင့်ကြောင်း Trump များအတွက်သူ၏နောက်ဆုံးဗီဒီယိုထဲမှာ Donald Trump ချီးကျူးခဲ့သည်။
ဂျင်ဆင်သည် coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားပြင်းထန်လွန်းပြီးသူနှင့်လည်းသဘောတူလိမ့်မည် သူသည်သေဆုံးမှုနှုန်းနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ပြားခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။ သူလည်းဒီရရှိသွားတဲ့ Bloomberg ငါပြီးသားယခင်ဆောင်းပါး၌ချိတ်ဆက်သောစာရွက်စာတမ်း။ အီတလီတွင်သေဆုံးခဲ့သူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အခြားအခြေအနေများနှင့်သေဆုံးနိုင်ကြောင်းရှင်းပြထားသည်။
သင်ပြောရသောစကားဟူမူကား၊ကောင်းပြီလား ဘာမှားလဲ သူလုံးဝမှန်သည်!?“ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပိုက်ကွန်တွေကလိမ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်။ သူတို့သည်သင့်အားအမှန်တရားကိုပင်ပြသပေးနိုင်သည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင့်အားတိကျသောအတွေးအယူအဆတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်သူတစ် ဦး Donald Trump ဖြစ်ပါတယ်။
Donald Trump သည်နက်နဲသောပြည်နယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုံးဝမပြုပြင်ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာပါက Donald Trump သည်ကမ္ဘာကြီးအားငိုကြွေးလိမ့်မည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားလျှင်၊ ဥပမာအားဖြင့်အီစတာတနင်္ဂနွေနေ့များအတွင်းတွင်အမေရိကန်များသို့လမ်းပေါ်ပြန်ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်အလွန်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, coronavirus ကပ်ရောဂါရုတ်တရက်ပြန်ပေါ်လာပေမယ့်ပိုပြီးအကြမ်းဖက်) လျှင်, ထို့နောက် Donald Trump ထောက်ခံသူတွေအတူတကွ Jensen နှင့်အတူတ ဦး တည်းလဲကျသုတ်၌ရိုက်ချိုးနေကြသည် ထို့နောက်လူတိုင်းက Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ငြင်းဆန်သောသံသယရှိသူများအားထောင်သွင်းအကျဉ်းချရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ မီဒီယာသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကိုပြန့်ပွားစေနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်လုံခြုံမှုကွန်ယက်မဟာဗျူဟာနှင့် Robert Jensen ငါးဖမ်းပိုက်မှုတ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဝေဖန်စဉ်းစားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့် 'ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း' သည်ထိုအချိန်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်သည်။
Janet Ossebaard ဘာမှားနေတာလဲ
ကျွန်ုပ်သည် ၇ နှစ်ကျော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီကိုတိုက်ခိုက်ရန်မရည်ရွယ်ကြောင်းထင်ရှားသင့်သည်။ 'ခါးပတ်အောက်' ကိုငါမကြိုက်ဘူး ငါစောင့်ကြည့်ခံရဖို့မဟာဗျူဟာဆန့်ကျင်သတိပေးကြဘူး။ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လျှို့ဝှက်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန် (pawns) အဖြစ်အသုံးချခွင့်ပြုသူများရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်နှင့် karma လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖြစ်သည်။
Janet အတွက် Q Anon သီအိုရီများကိုသူ၏ဗီဒီယိုများတွင်ကြေငြာသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဒါကြောင့်သူမကသင့်ကိုထိုင်ပြီးထိုင်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့အားပေးတယ်။ Trump ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအနီးပါမယ်။ ငါပြီးသားအကြောင်းရေးသားခဲ့သည် dit en dit ဆောင်းပါး
သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း ကောင်းစွာ ယုံကြည်တယ်၊
ထိုအတွေးသည်သင်လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်တွင်ဖမ်းမိပြီးသင်္ဘောတစ်ခုလုံးနစ်မြုပ်သွားသောအခါသင်စိတ်ပျက်မိသောအခါသင်ရရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့အသိစိတ်ကိုငါဆက်ပြောနေတယ်။ နောက်တစ်ခုက Robert Jensen ကဒီစကားလုံးကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်လွှင့်မှုမှာပြန်ပေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ဖြစ်တည်မှု၏ပင်ကိုစရိုက်သဘောအရသင်၏ 'သိစိတ်' နှင့်ပတ်သက်သည်။
ငါ့စာအုပ်ထဲမှာငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့အသိပညာအကြောင်းပြောပြီးငါတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေအကြောင်းပြောပြတယ်။ ကျွန်တော်အခုကြုံနေရပြီဆိုတော့ဒီကူးစက်မှုနှုန်းကိုလည်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ကျွန်တော်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မှာအများကြီးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်။ လယ်သမားတွေအားလုံးလမ်းတွေပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေရင်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အားလုံးစုရုံးနေရင်ငါတို့တစ်ခုခုပြောင်းလို့ရမယ်လို့သင်တကယ်ထင်သလား။ ပြည်နယ်သည်ပြသခဲ့သည်မှာသူကစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုအထင်ကြီးစရာမလိုဘဲစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ပစ်နိုင်သည်။
ငါတို့လုပ်နိုင်တာကငါတို့ကယ်ဆယ်ရေးကိုရောက်လာတဲ့ဂြိုလ်သားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်တယ်။ မေး Anon နှင့် Trump ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားထက်ကျော်လွန်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကအများကြီးပိုကြီးတယ်။ ငါတို့လုပ်နိုင်တာကမင်းရဲ့မူလဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါစာအုပ်ထဲမှာရှင်းပြပါ။ သင်အဲဒါကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ် ဆောင်းပါးများစွာတွင်၎င်းကိုသင်အခမဲ့ဖတ်ရှုနိူင်သော်လည်းသင်အိမ်၌ရှိနေသောကြောင့်ဖတ်ရန်အချိန်ရှိသောကြောင့်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်၊ ငါတို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအကျဉ်းချုပ်ကိုဖတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ငွေရှာဖို့စာအုပ်ရောင်းတာကိုရှာဖွေတဲ့အတွက်မကြာသေးခင်ရက်တွေတုန်းကကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်။ ဤစာအုပ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များမှ (လွတ်လပ်စွာဖတ်ရှုရန်) ဆောင်းပါးများကိုတစ်ရက်အတွင်းဖတ်နိုင်သည့်အရာအဖြစ်စုစည်းနိုင်ရန်အတွက်စာဖတ်သူများ၏တောင်းဆိုမှုဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။
source link ကို entries တွေကို: threadreaderapp.com, businessinsider.com, bloomberg.com
Tags:: Anon, နယ်မြေ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, Janet, Jensen, သန့်ရှင်း, နွားမုတ်ဆိတ်မွေး, Q, ရောဘတ်, ကို Trump, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအသားတင်, လုံခြုံမှုကိုအသားတင် pawns
25 မှမတ်လ 2020 19: 30
Jensen ဟာဒီညရုပ်မြင်သံကြားမှာဘရာဇီးသမ္မတ Jair Bolsonaro ကိုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
၎င်းသည်စခန်း ၂ ခုမဟာဗျူဟာနှင့်လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်၏နိယာမ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သို့ဖြစ်ရာ Coronavirus ကိုငြင်းပယ်သူများသို့မဟုတ်အရာအားလုံးအဆင်ပြေမည်ဟုပြောဆိုသောသူများသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန်လည်ရှင်သန်လာခြင်းကြောင့်မကြာမီပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခံရလိမ့်မည် (အနည်းဆုံးတော့မီဒီယာများမှပြသနိုင်ပြီးနိုင်ငံရေးအရကိန်းဂဏန်းများအရပြသမည်ဖြစ်သည်) ။ ထိုအခါ "ဝေဖန်သူများ" အားလုံးနှိုးဆော်နေကြသည်။ ပြန်လည်ပညာရေးစခန်းများ၊ ထောင်ဒဏ်များစသဖြင့်စဉ်းစားပါ။
Trump နှင့် Bolsonaro ကြောင်းဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အီစတာပြီးနောက်စွပ်စွဲပြစ်တင် Trump မျှော်လင့်ဖို့တစ် ဦး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် option ကိုပုံရသည်။
25 မှမတ်လ 2020 22: 25
Jensen ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်လိုက်ရုံနှင့်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်ကအမှန်ဖြစ်သွားသည်။ (35:25 min ။ )
28 မှမတ်လ 2020 11: 51
Trump ကဲ့သို့ပင် Bolsenaro သည်သူကိုယ်တိုင်“ အရူးနှင့်ဆိုးသောလူကြိုက်များ / အစွန်းရောက်လက်ျာလူ” အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအလေးအနက်ထားသည်။ သင်အားလုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သည်ကိုမြင်လျှင်နားလည်ရန်အလွန်ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူသည်
Jensen သည် NL နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကြောင်းများကိုပါရေးသားခဲ့သည်။ မီဒီယာသမားများတွင်ပါဝါများလွန်းသောကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားများသည်အမြင့်ဆုံးမီဒီယာများ၏လှည့်စားမှုနှင့်ကြိုးကိုင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ (အကယ်၍ မင်းတို့ပြောတာကိုမင်းတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့လည်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိုအဓိကချုပ်ကိုင်နိုင်သည်) ။
Jensen ရဲ့အဆိုအရကျနော်တို့ (နိုးနေသော) ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသူတို့ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင့်တယ်။
25 မှမတ်လ 2020 20: 01
အခုအချိန်မှာအရာရာတိုင်းဟာဝိညာဉ်ရေးအဆင့်မှာဖြစ်နေပြီဆိုတာသေချာပါတယ်။ လူများစွာသည်အာရုံပျံ့လွင့်မှုများကြောင့်ဤအရာကိုလက်လွတ်သည်။ သင်အလုပ်မှလွတ်မြောက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် netflix၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်၊ ဖြုတ်၊ ချွတ်၊ ထုတ်ပစ်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့သွားပါ။
25 မှမတ်လ 2020 20: 38
တစ်ခါတစ်ရံလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကျစရာဖြစ်လာသည်။ အင်္ဂလန်၏မင်းသားချားလ်စ်အပြင်ယခုတွင်လည်း Corona ရှိနေသည်။
Corona ရှိသည့်လူသိများသောလူ ဦး ရေသည်ယခုအခါ ၅၀ တွင် ၁ ဦး ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်လူများသည်၎င်းကိုပုံမှန်အတိုင်းတွေ့မြင်ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မီဒီယာ၌ (ရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်တော့မှစိတ်မ ၀ င်စားပါ။ ) ဥပမာဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူအရေအတွက် (MSM ၏အဆိုအရ) ဖြင့်သေခြင်းသို့ပစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MSM ၏အဆိုအရခန့်မှန်းခြေ ၄၀၀၀၀၀ ရှိသည်
ဒီကိန်းဂဏန်းကိုတွေ့တဲ့လူ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာမသိကြဘူး။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူပေါင်း ၄၀၀၀၀၀ တွင် Corona ရှိပါကဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ ၁၇၀၀၀ တွင် ၁ ယောက်ခန့်သည် Corona ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ငါ့ညီ၊ ပျော်ရွှင်စွာနိုးနေသောအချို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်ပျမ်းမျှအားထက်အနည်းငယ်သောလူ ၁၀၀ ခန့်တွင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အခြားအရာများအပြင်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Corona ကူးစက်မှုပေါင်း ၄၀၀၀၀၀ ရှိသည်။ ဒီလူ ဦး ရေရဲ့ဘယ်ရာခိုင်နှုန်းကလဲ။
ပျမ်းမျှအဖြေမှာလူပေါင်း ၄၀၀၀၀၀ သည် ၁% မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားအထိရှိသည်ဟု (ယုံကြည်သည်၊ မယုံကြည်သည်) ဖြစ်သည်။ ၁၀၀ အနက် ၂ ခုသာမှန်ကန်သောအဖြေကိုပေးခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာပျမ်းမျှဒတ်ခ်ျလူမျိုး (နှင့်အခြားတိုင်းပြည်မှလူများလည်းဖြစ်နိုင်သည်) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရေးသားသော Corona ရောဂါကူးစက်မှု ၄၀၀,၀၀၀ အရေအတွက်ကိုကြားရသောအခါသို့မဟုတ်၎င်းသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည် (wow 400.000% သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၅% သည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိသော Corona ရှိသနည်း။
ဒါကို Jair Bolserano ဆီကနေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်။ ပူတင်ကရုရှား၌ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်အားအတိအကျမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပူတင်က၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိပြီးရုရှားများသည် Big Brother ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုအတိအကျလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနီးကပ်အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဘာကြောင့်ကမ္ဘာလူ ဦး ရေအားလုံးနီးပါးအိပ်ရတာလဲ။ သူတို့ကလူစီဖာရီယန်အထက်တန်းလွှာကအံ့သြသွားပုံရတယ်။ အကယ်စင်စစ်လူတစ်ယောက်သည်နည်းနည်းစဉ်း စား၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သူမျှ corona မရှိပါဟုတွက်ချက်နိုင်သင့်သည်။ (ကျော်ကြားသောလူများမှအပလူတိုင်းနီးပါးတွင် Corona ရှိပုံရသည်) ။
25 မှမတ်လ 2020 21: 32
သင်သိသည့်အတိုင်း“ ကျွမ်းကျင်သူများ၏စကားကိုနားထောင်” ရမည်😉
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... ကိန်းဂဏန်းတွေကကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်တယ်။ Trumanshow? မင်းမသိဘူး
ကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာလူများသည်ကိန်းဂဏန်းကြီးထွားမှု၌သင်ကကွေးနေသည့်မြှားတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်အထိအစအ ဦး ၌သေးငယ်သည့်နံပါတ်များကိုတွေ့မြင်သောအနေအထားတွင်ရှိသည်။
26 မှမတ်လ 2020 02: 51
ကျွန်ုပ်၏“ ပညာရေး” PR-Public Relations တွင်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရာများမှာ - ကိန်းဂဏန်းများသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်စွာခေါ်ဝေါ်သောစာရင်းအင်းများ - သည်လည်ပတ်ရန်သင့်လျော်သောကိရိယာ (နည်းလမ်းများ) ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး = ပရိသတ်ကိုကစားခြင်း / လည်ခြင်း။ နံပါတ်များနှင့်အတူသင်တစ် ဦး ချင်းစီအခြေအနေ / အခြေအနေ / လူတစ် ဦး ချင်းစီဘီးထဲမှာပြောသောဖို့ "လျှော့ချ" နိုင်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်မင်းကလူသားတန်ဖိုးကိုဖယ်ထုတ်တယ်။ ကိန်းဂဏန်းများထုံအောင်၏နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေ့ခေတ်နည်းပညာရှင်ကိန်းဂဏန်း ၂ လုံးကိုသာအသုံးပြုသည်။ သုညနှင့်တဒင်္ဂသည်တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ overlay တစ်ခုဖန်တီးရန်။
အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါင်းမူးစေသည့်ကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ orientation ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါက context / framework တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်မှာ Framework / Context မပါရှိရင်သင်ဟာသူတစ်ပါးလက်ထဲကအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်များသည်သင်္ကေတများဖြစ်သည်။ (မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်နှင့်အတူ) ဆက်သွယ်မှု၏မသမာသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းအားလုံးဟာတကယ်တော့ဗလာဖြစ်နေတယ်၊ ​​သူတို့ကဘာမှမပြောပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရာအားလုံးကိုအတွင်းလူတွေကိုပြောပြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခုဇာတ်လမ်း (လှည့်ဖျား၊ လှည့်ဖျား) ကို decipher လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ဖြစ်သောအချိန်ရောက်လာပြီ။
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနံပါတ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကသင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်မြင်ကွင်းတွင် (face value) ဟုထင်နိုင်သည့်အရာများထက်ပိုပြီးပြောနိုင်သည်။ ထုံဖို့ထုံဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်များ / နံပါတ်များသည် (မသိစိတ်ဖြင့်) သင်သည်စတင်ခြင်းမဟုတ်ပါကသတိပြုမိခြင်းမရှိဘဲစိတ်လှုပ်ရှားမှု (= ခံစားချက်နိမ့်ကျခြင်း) ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားရန်အတွက်အချက်ပြဖြစ်သည်။ ပညာရေးစနစ်ကိုအဲဒီအတွက်အတိအကျရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ နံပါတ်များ / နံပါတ်များကိုတစ်ခုတည်းသောပုံစံ၊ ဗလာပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ knowledgeာအသိပညာမှအဆက်ဖြတ်ရန်“ တွက်ချက်ရန်သင်ယူ” ရမည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်နက်နဲတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ မျှော်လင့်ချက်သင်သည်ဤနောက်ထပ်သဘောတူခြင်းနှင့်မှတဆင့်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
26 မှမတ်လ 2020 07: 04
ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုစကားပြောခြင်းဆိုင်ရာ hypnosis (လူများတီဗွီသို့မဟုတ် YouTube ရုပ်သံလိုင်းများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုကောင်းသည်) ကိုခေါ်ဆောင်ရန်အတွက်ပုံအချို့ကိုစာရင်းပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကသင်၏သတိအတွေးဖြစ်စဉ်များကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူတို့သည် ဦး နှောက်ကြီးထွားခြင်းသို့မဟုတ်တွက်ချက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော်သင်၏ ဦး နှောက်သည်“ အရှိန်မလျော့” သောကြောင့်ဟောပြောသူသည်သင်၏သတိကိုကျော်လွှားကာသင်၏မသိစိတ်ဆိုင်ရာစိတ်ကိုကျောက်ဆူးချခြင်းဖြင့်ပရိုဂရမ်ဆွဲနိုင်သည်။
Master ဆက်သွယ်သူ (သို့မဟုတ် NLP အထူးကျွမ်းကျင်သူ) Robert Jensen သည်လည်းဤနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။
Jeroen Pauw လိုလူတွေအများကြီးကိုလည်းမင်းတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သင့်တွင် NLP နှင့်စကားပြောဆိုခြင်း hypnosis တွင်နည်းစနစ်မြောက်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်စာရင်းအင်းများနှင့်နံပါတ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ထို့ကြောင့်ဂျာနယ်၏အဆုံးတွင်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အမြဲရှိသည်။ ထိုအခါသင်သည်နံပါတ်များကိုမြင်ရလိမ့်မည်နှင့်သင်မြေပုံပေါ်တွင်နောက်ကျောနှင့်ထွက်ပစ်ချပါလိမ့်မည်။ သင်မြေပုံမှအပိုဖြစ်လိမ့်မည် (hypnotized)
25 မှမတ်လ 2020 20: 58
25 မှမတ်လ 2020 23: 38
ဒါကြောင့်ငါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရင် ၂၀၂၀ မှာ ၁၁ ပတ်အပြီးမှာငါတို့ဟာသေနှုန်းထက်နိမ့်ကျနေတယ်။
26 မှမတ်လ 2020 07: 37
ကျွန်ုပ်သည် Freeland ဆန့်ကျင်သူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့သက်သေပြနိုင်သနည်း။ မိုဘိုင်းအိမ်မှာနေပြီးငါ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုငါပြမယ်။ ” အိုကေဂျန်နက်၊ ငါ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုပြပြီးအဲဒီနောက်တခြားဘဏ်အကောင့်ကိုပြပါ။
ထို့အပြင် Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) စာရင်းသည် Vrijland ကိုမီးရှို့ရန်ပုံမှန်အတိုင်းနှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနှင့်အတူတုန့်ပြန်သည် (သူတို့ဘလော့များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအားလုံးနီးပါးတွင်လုပ်သကဲ့သို့; သူတို့အလုပ်သာဖြစ်သည်) ။
ကျွန်တော့်ဝေဖန်မှုကြောင့် Janet ဟာသူမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြုပြင်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုသာဖုန်းဆက်ပါကသူမအနေဖြင့် Q Anon မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယို (၃) ခုကိုအော့ဖ်လိုင်းအနေဖြင့်ယူပြီးအသစ်များဖန်တီးကာသူမ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်တန်း Kolder ။ ၎င်းသည်ကောင်းစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုရှိပြီးကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့် Q Anon မြှင့်တင်ခြင်းကိုအချိန်မီအတိအကျစတင်ခဲ့သည်။
29 မှမတ်လ 2020 16: 04
မစ္စစ်ဂျေ၏ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်မာတင်သည်လှူဒါန်းလိုသူအတွက်သူတို့ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သောတိုက်ဆိုင်မှု ff ??? NL33RABO03 ……… ..3 သည်လည်းနောက်ဆုံးဂဏန်းဖြစ်သည်။ သူမကိုယ်သူမလွှင့်ပစ်ခဲ့သော်လည်းသူမအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်နံပါတ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ပြောပါ
30 မှမတ်လ 2020 00: 07
သုညတုန့်ပြန်မှုများနှင့်ကြည့်ရှုသူ ၁၇,၀၀၀၊ +/- YT တွင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း
နှင့်မိနစ်63, ဒါမှမဟုတ် 666 ကောင်းတဲ့အရေအတွက်ကပြောရပေမည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Janet, အမဲဆီဖြီး Janet ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တကယ်တော့မိနစ် ၄၊ ၂၃ မှာသူမကပြောတယ်၊ သီးနှံစက်ဝိုင်းကြောင့်ငါတစ်နှစ်သေမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
31 မှမတ်လ 2020 08: 35
သူတို့ကလူရွှင်တော်သရုပ်ဆောင်များကိုမှတ်စုဖတ်ရန်အရိပ်အမြွက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အနည်းငယ်ပိုကောင်းသင့်သည်။ အဆိုပါ Kabal ၏ကျဆုံးခြင်း ..
သင်ဘယ်လို IMB အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသလဲ လျှော့ထားသောဝါကျအတွက်လဲလှယ်မည်လား။ ၎င်းတို့သည်မကြာမီဟောင်းစနစ်ကိုအစားထိုးမည့်ဘဏ္bankingာရေးဘဏ်စနစ်သစ်တွင်ရှိနှင့်ပြီလော။ Inoffizieller Mitarbeiters (IMB'ers) - သူတို့ဟာလူသားတွေအတွက်ယူဖို့ဟန်ဆောင်နေပေမယ့်တကယ်တော့သူတို့ဟာအကြီးမြတ်ဆုံးသစ္စာဖောက်များ၊ ဒီနေ့၏ NSB အဖွဲ့ဝင်များ? သင့်တွင်အိမ်တွင်း၌နေထိုင်ရန်နှင့်အစိုးရ၏တရားဝင်အဖြစ်အပျက်အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင့်အားပြောသော IMBers ရှိသည်။ သင်၌ IM Aners ရှိသူများက Q Anon နှင့် Trump တို့မှသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည်ဟုပြောကြားသည်။
31 မှမတ်လ 2020 08: 36
ဟုတ်တယ်၊ Lange IMB'er Frans သည်ဂိမ်းကိုကစားနိုင်သည်
ပတေရုသ Steegmans wrote:
2 မှဧပြီလ 2020 19: 53
2 မှဧပြီလ 2020 23: 09
« Coronavirus covid-19 lockdown update: သင်နိုးလာတယ်၊ ပိတ်မိနေပြီဆိုတာသိတဲ့အခါဘာလုပ်နိုင်လဲ။
coronavirus ကိုတိုက်ထုတ်ရန်အီတလီမြို့တော်ဝန်ကမီးသတ်သမားများကိုစေလွှတ်မည် »